कृष्ण र रुपाको छोरासँग खेल्दै गरेको यस्तो भिडियो पोस्ट, एकैछिनमा लाखौंले हेरे (भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारकृष्ण र रुपाको छोरासँग खेल्दै गरेको यस्तो भिडियो पोस्ट, एकैछिनमा लाखौंले हेरे (भिडियो हेर्नुहोस्)
February 2, 2021 admin समाचार 6431
रुपा र कृष्णले छोरासँग खे’ल्दै गरे यस्तो भिडियो पोस्ट, एकैछिनमा ला’खौंले हेरे (भिडियो सहित) सामाजिक संजा’लमा निकै नै लोकपि्र’य जोडी हुन रुपा र कृष्ण । उनीहरूको जोडीले लोक’पि्रयता भने त्यति सजिलो’सँग पाएको भने हैन । उनीहरू’को संघर्षको कथा वास्तवमा जो को’हीको लागि पनि एउटा प्रेरणा’दायी कथा बन्न सक्छ ।
उनीहरूको जोडी मु’नामदन को जो’डी जस्तै छ । वास्त’वमा भन्ने हो भने रुपा र कृष्ण क’लियुगका लागि राधा र कृष्णका जोडी हुन भन्दा पनि फरक पर्दैन । उनीहरु अहिले आफ्नो जिवन’लाई निकै उत्साहपुर्ण तरिकाले बिताइरहेका छन् । दुर्”घटनामा परि हात र खु’”ट्टा गु”’माएका कृष्णलाई रुपा’को त्यो साथ, सहयोग, माया अनि स्नेहले जि’उने आधार बनायो।
एक अर्का’लाई निकै माया गर्ने यो जोडी’लाई यति ठूलो दु’र्घट’नाले पनि कुनै हाल’तमा छुटा’उन सकेन । हात खु’ट्टा गु’माएका कृष्णलाई रुपाले माया, साथ र हौसला दुवै दिइन् ।सा’माजिक स’ञ्जालमा चलेको अभि’यानका कारण उनीह’रुले आ’र्थिक सहयोग पाए ।
भर्खरै मात्र यो जो’डीको लागि निकै ठुलो खुशी प्राप्त भए’को छ । यी कोमल जो’डीको केही महिना अघि मात्र सन्ता’न प्राप्ती भएको छ । पहिलो सन्तान:को रुपमा उनेहरु’को छोरा भएको छ । यस खुसीलाई रुपाले? सामाजिक संजाल’मा मा’र्फत से&यर गरेकी थिइन ।
छोरा जन्मा’एपछी रुपा र कृष्णको जीवनमा हर्ष र उ’मंगले भरिएको छ । छोरा को फोटो र भिडि’योहरु प्राय रुपाले सामा’जिक संजालमा सेयर गरिरहेकी हुन्छिन । त्यस्तै अहिले पछिल्लो समय उनीह’रूले छोसंग बनाए:को टिकटि’क भिडि’यो धेरै भाइरल भइरहेको छ ।
यी टिकटक भिडियो’हरुलाई धेरै दर्शनहरुके असाध्यै रुचाएका छन, जसरी रुपाले कृष्णलाई अनि कृष्णले रुपालाई रुचाएका छ । अब प्रस्तुत छ सोही भिडियो … जसलाई एक युटुब च्या’नल ले टु’क्रा भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छ । – हेरौं उक्त भिडियो
गायीका अञ्जु पन्तको विवाह छिटै हुँदै: उनका हुनेवाला वेहुलाका बारेमा जान्नुहोस्
इन्डियन आर्मी श्रीमानलाइ छोडेर भागेकी श्रीमती काठमाडौंमा यस्तो अवस्थामा भेटिइन्
सीताले वनबासको समयमा यस कारण लगाउँथिन् पहेँलो कपडा
January 19, 2021 admin समाचार 5133
महाभारत र रामायण नसुन्ने मानिस नेपा’लमा सायदै नहोलान् । तपाइँले रामायणमा राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण ल’गायत धेरै पात्रहरुको कथा सुन्नु नै भएकै होला । आज हामी तपाईलाई माता सीताले वन’बासको बेला किन पहेँलो रङकै
बढ्यो अमेरिकी डलर, हेर्नु’होस् कुन देशको विनिमयदर कति ?
May 13, 2021 admin समाचार 4658
बिहिबार अमे’रिकी डलरसहित केही देशको विनि’मयदर बढेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनि’मयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरि’ददर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १७ रुपैयाँ ७८
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र कुम्भमेलावाट स्वदेश फर्किदा देखियो यस्तो दृश्य, हजारौंको भिड (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 19, 2021 admin समाचार 4157
भारतको हरिद्वारमा आ’योजना गरिएको कुम्भमेलामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्रिभुवन अन्त’र्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समर्थकले स्वागत गरेका छन्। विमानस्थलमा थामि’नसक्नुको भिड थियो । भारतको ह’रिद्वारमा आयोजना गरिएको कुम्भमेलामा सहभागी भएर पूर्वराजा शाह आइतबार दिउँसो